ကျနော်တို့ Holmes ရဲ့အစိတ်အပိုင်းအချိန်နေထိုင်သူများဖြစ်ကြသည် | Holmbygden.se
– ကျနော်တို့ဗဟိုစတော့ဟုမ်းတှငျနထေိုငျ, Stureplansgruppen ကနေနှစ်ခုလုပ်ကွက်, ထိုသို့ရှာဖှေ
စုစုပေါင်းဆနျ့ကငျြဘ. ဒါဟာHolmsjönမှာရှာတွေ့ခဲ့သည်, ကိုယ့်ဗိုက်ကင်း. Norrland
ပြည်တွင်းသို့, သဘာဝနှင့်အတူကျေးလက်ဒေသတောခဲ့ကြသည်. နောက်ထပ်ရည်မှန်းချက်ခဲ့သည်
မဟုတျကွောငျးဟောင်းအိမ်သူအိမ်သားကိုရှာဖွေရန် “ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံစုံစမ်းစစ်ဆေး” ဒါပေမယ့်ဒါ
– ထိုရူပါရုံငြိမ်းချမ်းရေးကိုရှာဖွေခဲ့သည်, စုစုပေါင်းတိတ်ဆိတ်စွာပြတင်းပေါက်မှာထိုင်ဖို့,အဆိုပါမြက်ခင်းကျော်ကြည့်ရှု, တည်ရှိသောသစ်တော, ကျော်လွန်ပြီး. က
အဆိုပါအဘိုးနာရီသာသောအသံ ticking ဖြစ်ပါတယ်. အများဆုံး Self-ကူညီနေတဲ့ကျေးလက်တှငျနထေိုငျသညျ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးဘီဘင်ခဲ့အရာကိုတစ်ဦးကလွမ်းဆွတ်တောင်.
– ကျနော်တို့အဟောင်းträpatrongårdenရေကန် Holmes နှင့် Holmes ရဲ့ဘုရားကျောင်းဖို့ကိုလှိမ့လယ်ကွင်းအပေါ်စီးတွေ့ရှိခဲ့. အကြီးစားအဆိုပါ glaze ဖြစ်ပါသည်
တံခါး, အားလပ်ရက်များ, မြင်းစောင်း, မီးရထားတှဲ, woodshed, härbre, မီလီမီတာဖောက်လုပ်. အချို့ကသစ်တောမြေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် bargain တယ်အပေါင်းတို့နှင့်စတော့ဟုမ်းအတွက်တစ်ဝက်တစ်ဦးကအခန်းကဲ့သို့တူညီသောကုန်ကျ.
– ငါတို့ကဲ့သို့အနီးကပ်ရန်အဓိကအဆောက်အဦများနှင့်နွေရာသီရဲ့ပွနျလညျထူထောငျစတင် 1870 - တတ်နိုင်သမျှရာစုဗားရှင်း. ကွာမှန်တံခါးများအပေါ် hardboard နှင့်အတူ, အဟောင်းကိုådringsmåladepärlspontenဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်, ကာလနောက်ခံပုံများနှင့်အတူတက်, အဟောင်းသစ်သားကြမ်းပြင်နှင့်အတူထွက်, မီးဖိုနဲ့ယျာဉ်၏တိုးတက်မှုစသည်တို့မီးပူ. တချို့ကအခန်းပေါင်း 1800 ကနေလုံးဝနဂိုအတိုင်းခဲ့ကြသည်.
– ကျနော်တို့ကုမ္ပဏီများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများအတွက်မန်နေဂျာများအတွက်ခေါင်းဆောင်မှုဖှံ့ဖွိုးတိုးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်နှင့် ပတ်သက်. ကျွန်ုပ်တို့၏ဟောင်းလယ်ယာအတွက်ဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ် 40% အချိန်ကို, ရှိသမျှတစ်နှစ်ပတ်လုံး၏.
– ထိုအခါမှသာရွာ၌လူတို့နှင့်အတူကောငျးမှအဆက်အသွယ်ရှိခဲ့. တစ်ဦးဖြည့်စွတ်မြောက်ပိုင်းငြိမ်သက်ခြင်း၏ခြုံငုံပတ်ဝန်းကျင်ကိုအတွေ့အကြုံနှင့်သဟဇာတရှိခဲ့သည်.
– ကျနော်တို့ရှာဖွေနေခဲ့ကြသည်အရာအားလုံးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးပို, ကြှနျုပျတို့တခြားနေရာအခါအဆက်မပြတ်အဲဒီမှာညျ. ကျနော်တို့လယ်ထွန်စက်ရရှိပါသည်ကြောင့်စက်ရုံ၏ဖန်တီးမှုကိုရှေ့ဆက်ဖို့ကြွလာသောအခါ, စိတ်ကူးစိတ်သန်းရန်မအဆုံးလည်းမရှိ. “မိမိအ Self-ကျေနပ်မှု woodshed မြင်ထင်းရှူးနှင့် Spruce နှင့်ဘုစပတ်သစ်သား၏ကောင်းတဲ့အနံ့ခံစားရရန်စိတ်ဝိညာဉ်များအတွက်ဗာလစံစေးများမှာ”.
အီဗာနှင့် Per Tärnfors